ကျွန်တော်တို့ Demi Moore ရဲ့ရေချိုးခန်းအကြောင်းပြောဖို့လိုတယ် - ဖျော်ဖြေရေး
အောင်မြင်သူ မင်္ဂလာဆောင်ဖက်ရှင် လိင်ကိုချစ်တယ် အသိပညာ & ပညာရေး အပြင်အဆင် ချက်ပြုတ်နည်းများ ဒိုင် နိုင်ငံတကာ Femina ပါဝါအမှတ်တံဆိပ် အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ
ကျနော်တို့ Demi Moore ရဲ့ရေချိုးခန်းအကြောင်းပြောဆိုရန်လိုအပ်သည်
ဇူလိုင်လ ၈ ရက်၊ ၂၀၂၀ တွင်ဆိုရှယ်မီဒီယာကျွမ်းကျင်သူ Alexis Wilson အဆိပ်အတောက်ဖြစ်စေသည့်လေ့လာတွေ့ရှိချက်များအနက်တစ်ခုမှာတွီတာမှတွစ်တာတွင်တင်လိုက်သည်နှင့်၎င်းသည် Demi Moore ၏ရေချိုးခန်းတွင်ပါ ၀ င်သည်။ အရင်ကထူးဆန်းတဲ့ကျော်ကြားမှုအမိုးအကာနေရာမှာအကြောင်းအရာတွေတွေ့ခဲ့ဖူးတယ်။ Natalie Portman နှင့်သင့်လျှို့ဝှက်ဆန်းကြယ်သောမီးဖိုချောင် ), ဒါပေမယ့် Moore ကဖွင့်ကိတ်မုန့်ကိုယူလိမ့်မယ်။ Wilson ၏တွစ်တာသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။
Demi Moore တွင်သူမ၏ရေချိုးခန်း၌ကော်ဇောနှင့်အိပ်ရာနှစ်ခုလုံးပါရှိသည်ကိုဆွေးနွေးရန်တစ်ခုတည်းသောရည်ရွယ်ချက်အတွက်ချန်နယ်လိုင်းတစ်ခုကိုစတင်ခြင်း pic.twitter.com/4NeLbJCVpF
? Bunheads ကိုပြန်ယူလာလား။ Wilson (@sassyblackdiva) ဇူလိုင်လ 8, 2020
ဓာတ်ပုံများကို Moore ၏ကိုယ်ပိုင် Instagram အကောင့်မှရိုက်ယူပြီးသူမက 'ငါကြိုးစားနေတာကိုမျှဝေဖို့စိတ်လှုပ်ရှားခဲ့တယ်! ပထမအပိုင်း #DirtyDiana တနင်္လာနေ့, ဇူလိုင်လ 13 ဇီဝအတွက်နောက်တွဲယာဉ်ပြန်လည်ရုပ်သိမ်းသွားခဲ့သည်။ '' Dirty Diana Moore မှထုတ်လုပ်လိုက်သောခေါ်ဆောင်သွားသည့် podcast စီးရီးအသစ်ဖြစ်ပြီးနောက်တွဲယာဉ်ကိုနားထောင်ခြင်းတွင်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်သည် ဒီမှာ (psst: NSFW ... သို့မဟုတ်ကလေးများဖြစ်သည်)
ထိုအသေး ... သူမ၏ရေချိုးခန်း ... ခေါ်ဆောင်သွားပေမယ့်ဘာမှဖြစ်ပါတယ်။ စူးစမ်းလေ့လာကြပါစို့။
@ demimoore / Instagram
Wilson ထောက်ပြသည့်အတိုင်းကော်ဇောနှင့်အိပ်ရာခင်းသည်သင့်ကိုကွင်းဆက်တစ်ခုအတွက်သာတကယ်လိုချင်သည်။ အနာကိုစဉ်းစားပါ! ဒီတော့ဒါကယာယီပဲ။ Moore က Podcast တခုကိုမြှင့်တင်လိုက်တယ်။ သူမကအသံသွင်းနေတဲ့ဟန်၊ နားကြပ်၊ မိုက်ခရိုဖုန်း၊ ဇာတ်ညွှန်း (ဒုတိယပုံမှာတွေ့ရတဲ့နှစ်ခု) ဒါကြောင့်သူမသည်သူမ၏ရေချိုးခန်းတွင် make-shift စတူဒီယိုအနည်းငယ်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။ ဒါကကော်ဇောနဲ့အိပ်ရာကိုအဓိပ္ပာယ်ရှိစေတယ် - ပဲ့တင်သံကိုသူတို့စုပ်ယူတယ်။
ပိုမိုနီးကပ်စွာစစ်ဆေးမှုတွင်၊ ၎င်းသည်ယာယီကော်ဇောမဟုတ်ပါ။ ယာယီကော်ဇောသည်အိမ်သာအခြေအနေနှင့်လုံးဝမကိုက်ညီပါ။ ပြီးတော့အိမ်သာအကြောင်းပြောရင်ဘယ်ကစတာလဲ။ အဘယ်သူသည်သူတို့၏စားပွဲခုံနှင့်ပွင့်လင်းအိမ်သာအနီးရှိအလွန် fibrous အိပ်ရာလိုလား? ကျွန်ုပ်တို့၏အလုပ်မှအိမ်မှအထူးသီးသန့်ထားသည့်အိမ်များတွင်ပင်ရေချိုးခန်းနားချိန်ကိုယူခြင်းသည်အလုပ်ခွင်မှသက်သာခြင်းဖြစ်သည်။ Moore ကသူမအိပ်ရာပေါ်ကနေထွက်ပြီးသူမရဲ့ထိတွေ့နေတဲ့အိမ်သာကိုခုန်နေသလား။ သေချာတာပေါ့၊ Moore မှာသူမအိမ်မှာရွေးချယ်စရာအိမ်သာအများကြီးရှိကောင်းရှိလိမ့်မယ်။ သူမ၏အိုင်ပက်ရှိလုပ်ဖော်များသည်မျက်နှာပြင်မကျဘဲဘာဖြစ်နိုင်သည်ကိုသိသလား။
သူမဖွင့်လှစ်ထားသည့်ဘေးပတ်လည်တွင်အသံကိုပုံမှန်အားဖြင့်အသံသွင်းထားခြင်းမရှိသောအချက်လည်းရှိသည်။ Moore ၏ဖွဲ့စည်းပုံတွင်သူမနှင့်ပတ်သတ်သည့်အိမ်သာနှင့်စည်ပိုင်းနှစ်ခုရှိသည်။
Wilson ၏ချည်မျှင်ကိုမှတ်ချက်ပေးသူအနေနှင့် Knight ၏ပြtheနာလည်းရှိသည်။ ဟုတ်တယ်၊ ရေချိုးကန်ကိုအပေါ်စီးကနေအရွယ်အစားမြင်နိုင်တဲ့နိုက်တမျိုးရုပ်ပုံ (ဒါမှမဟုတ်အနည်းဆုံးသူ့ခြေထောက်တွေ) တပ်ထားတယ်။ ဒီ Moore က erotica ကိုယူတာလား ငါတို့ဘယ်တော့မှသိမှာမဟုတ်ဘူး။
?? ဒီချည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုတစ်စုလုံးမြည်တမ်းပါသည်! https://t.co/rFcsbHpmqi
? Demi Moore (@justdemi) ဇူလိုင်လ 12, 2020
Moore နှင့်သူ့မိသားစုတစ်စုလုံး Wilson ၏ကြိုးမျှင်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကဲ့သို့ပင်ရယ်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။
RELATED: Demi Moore သည်အော်စကာဆုအတွက်စက်ဘီးဘောင်းဘီတိုကို ၀ တ်ဆင်ခဲ့သည်
Categories ချက်ပြုတ်နည်းများ ရေရှည်တည်တံ့သောမီးဖိုချောင် ကြည့်ရမယ်
မင်္ဂလာဆောင်ဘို့ဒီဇိုင်းများ lehenga choli
2017 ရင်ခုန်စရာ hollywood ရုပ်ရှင်စာရင်း